Vidio izao ny Xiaomi Mi Band 6 amin'ny 38 euro | Androidsis
La Fampandrenesana marani-tsaina vaovao Xiaomi Mi Band 6 no nambara ora vitsy lasa izay ary ankehitriny dia efa afaka manafatra amin'ny aliexpress ianao hahazoana izany amin'ny 38 euro.
Fotoana tsara hananana fehin-tànana izay nohavaozina miaraka amin'ny «écran rehetra» eo amin'ilay tontonana ary mamela izany miavaka izay nanala toerana hahafahana mankafy azy eo amin'ny efijery. Fitaovana vaovao iray vaovao tonga hampidina ny manaraka; Ary tsy tokony hampihemotra ny kalitaon'ny maodely Xiaomi Mi Band rehetra izahay.
1 Manolo ny Xiaomi Mi Band 5
2 Lisitry ny toetra ara-teknika Xiaomi Mi Band 6
3 Vidio izao 38 Euro
Manolo ny Xiaomi Mi Band 5
Isan-taona dia manana maodely Xiaomi Mi Band vaovao izahay ary amin'ity indray mitoraka ity ny zava-baovao manaitra indrindra mijanona eo amin'ny efijery na tontonana izay mibodo ny habaka iray mitovy. Izany hoe "efijery rehetra" eo amin'ny tontonana izay mitondra ny maodely Mi Band isan-karazany.
Tamin'ny teo aloha, ny efijery dia tsy nibahana ny toerana rehetra teo aloha, fa tamin'ity indray mitoraka ity Xiaomi no nanamboatra azy manome traikefa feno ho an'ny efijery na tontonana iray toa tsy mbola nisy toy izany teo aloha; porofon'ireo sary navoakan'ny orinasa sinoa nandritra ireo andro namoahana azy ireo.
Pikantsary somary lehibe kokoa, maranitra ary misy teboka marobe izay mahatratra 326 teboka isaky ny santimetatra. Araka ny voalazan'i Xiaomi, ny ny efijery dia 50% lehibe kokoa noho ny maodely teo aloha, mba hahafahanao maka sary an-tsaina ireo angona izay mahaliana anao amin'ny fomba tsara indrindra.
Ny Mi vaovao Ny Xiaomi's Band 6 dia mifantoka amin'ny fanatanjahantena indray miaraka amin'ny fahaizana mandrefy oxygen amin'ny ra noho ny fandrefesana SpO2, ary mazava ho azy, ny tahan'ny fo.
Lisitry ny toetra ara-teknika Xiaomi Mi Band 6
efijery 1 AMOLED 56 "326 dpi 450 nits
Sela Mpandray Hafanana Ny tahan'ny fo sy ny oxygen oxygen
Fanoherana rano Metatra 50
fizakantena 14 andro (19 miaraka amin'ny maody toekarena)
ny hafa Fiampangana andriamby
vidiny 44.99 €
Araka ny efa nolazainay, sisa tavela amin'ity efijery ity isika mitombo 1,56 santimetatra hamadika azy io ho axis lehibe amin'ity maodely Xiaomi vaovao ity ary efa mampiasa ny piggy bank ianao hihazonana azy. Ny vidiny dia € 44,99, na dia amin'io andro io ihany dia efa afaka manafatra azy avy amin'ny Aliexpress mba hahazoana izy mihoatra ny 38 euro fotsiny.
Ny iray amin'ireo fanatsarana manaitra indrindra dia ny fanaingoana ny fahefana manana hatramin'ny 130 spheres sy 4 SpongeBob Squarepants manokana raha tadiavinay ny efijery Mi Band 6-tsika hahaliana sy hahafinaritra indrindra.
Vidio izao 38 Euro
Iray amin'ireo hatsaran-toetran'ny vaovao Xiaomi Mi Band 6 dia mahatratra hetsika ara-batana 30 izay mahay mamantatra amin'ny maody fiofanana sy ny fahaizany mamantatra ho azy hetsika 6: mandeha mihazakazaka, bisikileta ary eliptika.
antsika havela maodely tokana ihany isika amin'ny faranySatria ilay iray miaraka amin'ny NFC ary mamela ny fandoavam-bola amin'ny finday, dia tsy hiala amin'ny faritany sinoa izy tahaka ny tamin'ny maodely teo aloha. Na dia afaka manantena aza izahay fa hanaitra antsika i Xiaomi amin'ity lafiny ity ary afaka mihazona an'io Mi Band 6 miaraka amin'ny NFC io isika.
La Xiaomi Mi Band 6 dia amidy any China ny 2 aprily ary avy amin'ny rohy Aliexpress dia azonao atao izao manomboka izao ka rehefa misy izany dia afaka folo andro eo ho eo ianao vao tonga any an-tranonao ary tsy misy vidiny fandefasana.
Rohy mankany amin'ny fividianana - Xiaomi My Band 6
Ho tonga eto amin'ny € 44,95, noho izany ianao dia amin'ny fotoana mety indrindra hitsimbinana efa ho 7 euro ny hanana an'io eo am-pelatanan'ilay voalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Azonao atao izao ny mividy ny Xiaomi Mi Band 6 vaovao amin'ny 38 euro